Kukhethwa efanele kokuphothula zokwakha ukudla inendima enkulu. Bazokusiza hhayi kuphela okuguqula isikhala, kodwa futhi lula yokuhlanza. Kodwa lokhu ehilelekile kubaluleke ngokukhethekile, njengoba kukhona nakanjani kumiswa okunamafutha qwembe umule nezinye izinto ezihlobene ne ukupheka. Ngokukhethekile kufanele ikhokhwe kuleyo ngxenye odongeni esemgwaqweni phakathi worktop kanye ikhabethe uyahlanganyela. Ibizwa ngokuthi "ekhishini iphinifa". Kuyinto kule ndawo Lesi sifo siphatha kakhulu ukungcoliswa, njengoba itholakala iseduze kobuso zokusebenza. Indaba sikhethelwe yokuqedela yayo, kumelwe afinyelele izimfuneko ezithile futhi kuyadingeka ukuba abe nombono. Ikhishi iphinifa plastic okwamanje kakhulu okufunekayo ethandwa kakhulu.
Indlela kukhethwa impahla
Lapho ukhetha impahla kokuphothula for ekhishini, kubaluleke kakhulu ukuba banamathele izimfuneko ezithile. Lo isidingo ezingaphansi kwethu ukuze sandise isikhathi phakathi yesondlo izindawo. Le nqubo ngempela eqolo, kanti futhi akubona bonke bakwazi ukukwenza njalo ngonyaka, ngakho zonke izinto yokuqedela esetshenziswa kumele babe izakhiwo ezithile, okuzokwenza ukuwugcina ngokuphelele injongo ethile ekhishini isikhala. Ngokukhethekile kufanele kukhokhelwe iphaneli ukukhethwa iphinifa. Kusukela ngokunemba isinqumo kuzoncika nokwethenjelwa usizo yokuqedela.
ukumelana ukucindezeleka mechanical, ukucutshungulwa amakhemikhali, umswakama,
Ukusebenza endaweni eduze isitofu njalo ekuthonyweni okushisa aphezulu, ngakho-ke kubalulekile ukugcina siphephe, ukuze ugweme imililo. Iphinifa ukuze ekhishini (ngezansi) ngalesi ingxenye ubenawo umlilo izakhiwo. Uma lisetshenziswe kokuqeda impahla ezifana chipboard noma zepulasitiki, kubalulekile ukuba sihlanganise ke ngensimbi engagqwali noma ezinye impahla refractory. It lihlelwe zokuhlobisa usebe ukuphakama 20 cm. Lokhu kwanele lokuzivikela bona nabathandekayo babo.
izinto Modern for ekhishini
Abakhiqizi okwamanje baye baklama eziningi yokuqedela ngezinto ezahlukene. Ahluke intengo, izinga, ukuthungwa nombala. Ezinye izinto zemvelo abekho eyamukela ukwehluka ocebile imibala, okwenza zilinganiselwe kakhulu ukusetshenziswa kwazo. Ukusebenzisa izinto ezinjalo kungaba khona kuphela ngesibusiso isitayela esifanele yonke indawo. Kodwa izinto yokufakelwa adalwe ubuchwepheshe besimanje, ngokuvumelanayo alingeni kunoma yiziphi lokubhalela. Ukuze womshini yabo isebenzisa ebanzi ezahlukene umbala exutshiwe ngemihlobiso ezahlukene kanye nemidwebo. Ngokwesibonelo, iphinifa nge ukuphrinta isithombe plastic, wenza ku-3D. Kukhethwa elikhulu, ungakwazi ukhethe best ukuthi wanelise yobuhle izidingo, ikhumbula izindleko zezimali kungenzeka.
iphinifa Plastic. izici lobuchwepheshe
Plastic - impahla engabizi ukuthi ilungele kokuqeda ekhishini isikhala. Indawo yayo abushelelezi ngokuphelele, okwenza kungabi ekuqongeleleni udoti. Zonke umule namafutha enamathela ubizwa wageza kalula ngokusebenzisa insipho evamile. Nokho, iphinifa ekhishini plastic ayikwazi bahlanza ne metal ibhulashi, njengoba imihuzuko angahlala. Futhi, le nto akakubekezeleli yokusingatha izinto athile.
Uma kuqhathaniswa namanye izinto inotiyela, epulasitiki kancane eliphansi in ukuqina. Nokho, izindleko zayo futhi kalula ukufakwa wenze lokhu yokusilela kwamukelekile ngempela.
Abantu abaningi ezihambisana ilineni plastic emhlophe. Nokho, intuthuko akemi namanje. Iphinifa Ikhishi (sihloko fotoprimery) ka PVC panel okwamanje eliphansi in ukubhaliswa design ezinye izinto ebizayo, skinali ezinjalo. Bona zingatholakala ngemibala eziningi ezahlukene: shades ezisukela amathoni elimnandi elibuhlungu, ngisho ngezinye izikhathi ngokugqamile kakhulu. Ingcebo enjalo Iphalethi uyokwenza umhlaba emaphakathi ekhishini iphinifa okungafani accent. Abaningi panel zigcwele inala ezihlukahlukene amaphethini nge ngezihloko eziningi ezihlukahlukene, futhi kukhona izinketho ngokusebenzisa ukufakwa isithombe nazo. Indlela eqondile ukufakwa ikuvumela ukufaka izibani ezengeziwe ngesimo emapheshana LED, uveza nomphumela emangalisa futhi ngesikhathi esifanayo ngcono Ergonomics isikhala ekhishini.
Ikhishi iphinifa izesekeli plastic kuso
Omunye iqeda endaweni umsebenzi alanele ukuze isebenze ngokugcwele isikhala. Plastic kungaba kuphela ukuthi umhlobiso futhi umphelelisi elingaphakathi, kodwa ukufakwa izesekeli ekhethekile ukwandisa lula nenduduzo. Ukuze odongeni panel akuyona njengokukhuluma okuyize, futhi ukufeza imisebenzi eminingi, kufanele ufake i-komzila ekhishini ophahleni. Zimelela ngamapayipi eside, ngokuvamile ezenziwe ngensimbi engagqwali, okuyinto ogibele kubakaki ezimbili noma ngaphezulu. Ekupheleni ohlangothini ngalunye afakwa ipulaki, banikeza yobuhle design ukubukeka isiqedile. komzila egibele buqamama ezincane kusukela amakhabethe odongeni, ezingasetshenziswa kakhulu okwehlisa ebusweni umsebenzi. On the tube main enamathiselwe izesekeli ozikhethela, ezifana iziqukathi izinongo, isinkwa bin, umshini wokomisa nezinkezo nezimfoloko, emashalofini encane anezikhala.
Yikuphi design ukukhetha?
Amaphinifa eyenziwe ngepulasitiki akudingeki ukuba abe isici esihlukile ekhishini, futhi ngokuphambene nalokho, uhambisane isitayela jikelele. Ubuningi imibala nezithombe ngesinye isikhathi kunzima ukukhetha. Ukuze ngokuvumelana walawula ikamelo kanye isimo ethokomele, kumelwe uzigcine le mithetho elandelayo:
Lapho eqhathanisa egqamile futhi ekhishini isethi iphinifa endaweni senziwa ngemibala elithambile, ngokulandelana, kunalokho.
-Daylight imibala kusuka ayegcwele ukunqanda, isibonelo: izindonga orange somlilo, kanye nomsebenzi endaweni - umbala isihlabathi.
Ikhishi iphinifa is okungafani ukugcizelela on isizinda hlangothi.
Amaphinifa eyenziwe ngepulasitiki. usayizi elilungile
Ukuze kube iphutha nge ububanzi iphinifa ekhishini, okokuqala, uzodinga ukuhlela ifenisha, hang ikhabethe uhlanganyela futhi ufake kwenzakalani. Ngemva kwalokho ngeke ibonakale isithombe jikelele. Ukumeda yekhasi ngalinye kumele kwenziwe ngesikhathi amaphuzu amathathu, ukuze kususwe zobukhulu sinembe kakhulu. I iphutha phakathi kwangu ambalwa kwamukelekile futhi ezidlulanayo ngokuphelele plinth ekhethekile. Ukuphakama elikhulu 50-60 cm ekhishini iphinifa. Le ndawo elula kunazo, kuyilapho ukupheka uwayehlalise wayengeke iqhubu ikhanda amakhabethe odongeni, kanye ukufinyelela kwabanye izinto noma izinongo.
Izindlela ufakile panel plastic
Inzuzo main PVC amashidi - ukufakwa kulula. Ikhishi iphinifa eyenziwe ngepulasitiki is ethe njo ebusweni usebenzisa izinzipho ketshezi. Lokhu kungase kudinge ukuthintana okuthile umsebenzi eyengeziwe ehambisana ne-ukuqondanisa odongeni. Nokho, le ndlela has eyodwa ethile: ukususa iphaneli ngesikhathi ukuqaqa, ngaphandle kokulimaza ke, ngeke isebenze. Ngakho-ke, ochwepheshe batusa ukusetshenziswa nokubopha nge ngezikulufo. Ukuze wenze lokhu sokuprakthiza e wonke amagumbi PVC ishidi imbobo ubukhulu engekho ngaphezu kuka 3-5 mm. Khona-ke, uma ucabangela ubukhulu, profile enamathiselwe udonga noma ibhodi sokhuni, lapho iphinifa epulasitiki ngqo ukukhwezwa. Ukuze yobuhle nezikulufi zokuhlobisa ukumboza CAPS noma ofeleba ekhethekile.
ikhishi Plastic. izinzuzo
panel Plastic ziyinkomba ukuhambisana intengo nekhwalithi. Ngezindleko ngokwanele ongaphakeme Banelungelo Izakhiwo ezilandelayo:
ukushisa kanye ukwahlukanisa umsindo;
amelana umonakalo lokukhanda.
Yiqiniso, akusiwona zonke izinzuzo ezingaba lungachazwa ekhishini iphinifa plastic. Izibuyekezo zabantu abafake panel enjalo, ukuvumela ukuba bafinyelele iziphetho eziqondile. Ukuze uqale, uzodinga hlola izinga material aluthola, ukuvimbela manga. Khona-ke yenza ngcono index ncibilika, akufanele kube ngaphansi kuka-100 0 C.
Ngeshwa, noma iyiphi impahla esetshenziswa umhlobiso, has bokwenza PVC panel akuzona okuhlukile.
Uma amafasitela ekhishini nazo eningizimu, ngaphambi kwesikhathi nokutubeka ebusweni kungenzeka, okuholela ekulahlekeni owaqalwa futhi sibukeka kahle.
Nakuba ukunakekela Ungasebenzisi emabhulashini kanzima,-steel wool, njengoba lokhu ungashiya imihuzuko.
Ikhishi iphinifa eyenziwe ngepulasitiki has a ongaphakeme umlilo ukumelana.
Ukusetshenziswa PVC panel ngeke kuphela ukuvimbela ukusilaphazeka kwendawo umsebenzi ekhishini, kodwa futhi ngeke kube umhlobiso yokuqala lonke igumbi, wasinikeza okwakhe futhi ubuntu. The kungenzeka esikhundleni ngokwengxenye kuzovumela ngaphandle ukulungisa egcwele, ukushintsha design kuyisicefe noma izingxenye enesici, lokhu kuyoba okwanele ukususa amahlamvu amadala ebese endaweni yayo ukusungula omusha. Ikhishi iphinifa eyenziwe ngepulasitiki ngezandla zakho kulula ukuyiqhaqha, ngakho le nqubo kuzothatha isikhathi esithile.
Ukuze ukudala enhle ngempela, futhi okuthembekile esisebenzayo ekhishini ingaphakathi, singasebenzisa ngokuphepha yokuqedela PVC panel.
10 engcono ekhishini eziqongweni - Cuisine Italian ku TOP